Madaxda maamul goboledyada oo looga yeeray magaalada Muqdisho – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaMadaxda maamul goboledyada oo looga yeeray magaalada Muqdisho
Hiiraan Xog, Oct 13, 2017:- Warar hoose oo goordhow nasoo gaaray ayaa sheegaya in Dowladda Soomaalia ay casuumaad rasmi ah u sameysay Hogaamiyayaasha maamul Goboleedyada ka jira dalka.
Dowlada ayaa sheegtay in dhammaan Hogaamiyayaasha ku shiray magaalada Kismaayo laga sugaayo magaalada Muqdisho, si looga wada hadlo masiirka dalka.
Waxa ay dowladu tilmaantay inay ka go’an tahay sidii loo xojin lahaa wada shaqeynta u dhaxeysa dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka.
C/raxmaan Cumar Cusmaan ”Yariisow”, oo ah Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, ayaa xaqiijiyay in casuumaada looga gol leeyahay xalinta cabashooyinka jira isla markaana laaga wada tashan lahaa amuuraha khuseeya dalka.
Wasiirka oo arrinta casuumaada ka hadlaayay ayaa yiri ”Baaqii Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaah Maxamed (Farmaajo) ee ahaa midnimada iyo wadajirka in laga wada shaqeeyo ayaa saldhig u ah casuumaada loo fidiyay Hogaamiyayaasha”
”Sidaasi darteed Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha waxay casuumaad rasmi ah u dirayaan Madaxda Dowlad Goboleedyada, si looga hadlo xiriirka iyo wadashaqeynta.”
Dhinaca kale, Wasiirku ma uusan sheegen xiliga rasmiga ah ee Hogaamiyayaasha laga sugaayo inay kusoo gaaran magaalada Muqdisho.
President Waare Handed Over Vehicles for Police Hirshabelle